သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Drama Poster နဲ့တင် ကြည့်ချင်စိတ်တွေပေါက်မိ 😍 – Trend.com.mm
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Drama Poster နဲ့တင် ကြည့်ချင်စိတ်တွေပေါက်မိ 😍
Posted on August 3, 2018 by Noel
မကြာခင်ထွက်ရှိလာမယ့်ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲသစ် “Lovely Horror-vely” အတွက် ပိုစတာလေးတွေထွက်ရှိလာပါပြီ! ဒီဇာတ်လမ်းတွဲဟာ Horror နဲ့ အချစ်ဟာသလေး ရောနှောထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တွေကတော့
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ RM မင်းသမီးချောလေး Song Ji Hyo နဲ့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေအသည်းစွဲ မင်းသားချော Park Shi Hoo တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ တစ်ယောက်က ပျော်ရွှင်နေတဲ့အခါ တစ်ယောက်က ကံမကောင်းမှုတွေကြုံရတဲ့ပုံစံလေးပါ။မင်းသားPark Shi Hoo ကိုတော့ ဒီဇာတ်ကားမှာ နာမည်ကျော်ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်၊ကံအရမ်းကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတာမြင်တွေ့ရမှာပါ။Ji Hyo ကတော့ သေချာစီစဉ်ထားပေမဲ့လည်း အမြဲလွဲနေတတ်သူ ကံမကောင်းတဲ့ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာမတစ်ယောက်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကံကြမ္မာဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲ၊နှစ်ယောက်သားဘယ်လိုအလွဲလေးတွေကြုံရမလဲ၊ဘယ်လိုထိတ်လန့်စရာတွေဖြစ်သွားကြမလဲဆိုတာ ဟာသလေးနှောပြီး ကြည့်ရှုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုစတာတွေနဲ့တင် အရမ်းကိုမိုက်နေပါပြီ။ထိတ်လန့်စရာတွေရော၊ရယ်စရာတွေရော၊အချစ်အခန်းလေးတွေရော ပါတာဆိုတော့ တစ်ကားနဲ့တင် ဇာတ်လမ်းအစုံအလင်ခံစားရမှာပါ။ပရိသတ်တွေလည်း စိတ်ဝင်တစားနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သြဂုတ်လ ၁၃ရက်နေ့မှာတော့ အကြိုပြသပွဲလုပ်မှာပါတဲ့။အခုတော့ ပိုစတာလေးတွေ တစ်ချက်ရှိုးလိုက်ပါဦး
မကွာခငျထှကျရှိလာမယျ့ဒရာမာဇာတျလမျးတှဲသဈ “Lovely Horror-vely” အတှကျ ပိုစတာလေးတှထှေကျရှိလာပါပွီ! ဒီဇာတျလမျးတှဲဟာ Horror နဲ့ အခဈြဟာသလေး ရောနှောထားတဲ့ ဇာတျလမျးလေးပါ။ဒီဇာတျကားထဲမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့အနုပညာရှငျတှကေတော့
ပရိသတျတှခေဈြကွတဲ့ RM မငျးသမီးခြောလေး Song Ji Hyo နဲ့ နှုတျခမျးနီမလေးတှအေသညျးစှဲ မငျးသားခြော Park Shi Hoo တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဇာတျလမျးပုံစံလေးကဘယျလိုမြိုးလဲဆိုတော့ တဈယောကျက ပြျောရှငျနတေဲ့အခါ တဈယောကျက ကံမကောငျးမှုတှကွေုံရတဲ့ပုံစံလေးပါ။မငျးသားPark Shi Hoo ကိုတော့ ဒီဇာတျကားမှာ နာမညျကြျောထိပျတနျးမငျးသားတဈလကျ၊ကံအရမျးကောငျးတဲ့သူတဈယောကျအဖွဈသရုပျဆောငျထားတာမွငျတှရေ့မှာပါ။Ji Hyo ကတော့ သခြောစီစဉျထားပမေဲ့လညျး အမွဲလှဲနတေတျသူ ကံမကောငျးတဲ့ဇာတျညှနျးရေးဆရာမတဈယောကျအဖွဈသရုပျဆောငျသှားမှာဖွဈပါတယျ။
သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ကံကွမ်မာဘယျလိုပွောငျးလဲသှားမလဲ၊နှဈယောကျသားဘယျလိုအလှဲလေးတှကွေုံရမလဲ၊ဘယျလိုထိတျလနျ့စရာတှဖွေဈသှားကွမလဲဆိုတာ ဟာသလေးနှောပွီး ကွညျ့ရှုရမှာပဲဖွဈပါတယျ။ပိုစတာတှနေဲ့တငျ အရမျးကိုမိုကျနပေါပွီ။ထိတျလနျ့စရာတှရေော၊ရယျစရာတှရေော၊အခဈြအခနျးလေးတှရေော ပါတာဆိုတော့ တဈကားနဲ့တငျ ဇာတျလမျးအစုံအလငျခံစားရမှာပါ။ပရိသတျတှလေညျး စိတျဝငျတစားနဲ့စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုအားပေးကွမယျလို့မြှျောလငျ့ပါတယျ။သွဂုတျလ ၁၃ရကျနမှေ့ာတော့ အကွိုပွသပှဲလုပျမှာပါတဲ့။အခုတော့ ပိုစတာလေးတှေ တဈခကျြရှိုးလိုကျပါဦး
ရုတ်တရက်မမှတ်မိလောက်အောင် ဝိတ်တက်လာတဲ့ CL ကိုကြည့်ပြီး ပရိတ်သတ်များ အံ့သြနေရ